Sitemap-ဂျင်ချိ UNITE ကို ပုံ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ငါတို့ ဝန်ဆောင်မှု | နာမည်ကြီး ဖောက်သည်များ နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်
မော်တော်ကား ထုတ်ကုန်များ မှို
ခရီးဆောင် ကလေး ဘေးကင်းရေး ထိုင်ခုံ | ရှေ့ ဝင်ပေါက် Grid ကွင်းခတ် | မော်တော်ကား ရေ ရေနံတင် | မော်တော်ကား အင်ဂျင် အစိတ်အပိုင်းများ | မော်တော်ကား အင်ဂျင် အပိုင်း | မော်တော်ကား အင်ဂျင် အစိတ်အပိုင်းများ | မော်တော်ကား အင်ဂျင် အပိုင်း | မော်တော်ကား ဂီယာ သတျတော ဖုံးအုပ်ထားပါ
နေအိမ် အသုံးအဆောင် မှို
အလေးချိန် စက်ယန္တရား ရှေ့ ဖုံးအုပ်ထားပါ | ဆေးကြောပါ Maching ရှေ့ ကွင်းခတ် | TP-LINK ဖုံးအုပ်ထားပါ | ရိုးရှင်းသော ဖျော်ရည် | ကော်ဖီ စက်ယန္တရား ကွန်တိန်နာ | အသံပညာ အောက် ဖုံးအုပ်ထားပါ
အီလက်ထရောနစ် ထုတ်ကုန်များ မှို
လက်မှတ် စစ်ဆေးနေသည် စက်ကိရိယာ ဖုံးအုပ်ထားပါ | ကြားရတယ် ဖုံးအုပ်ထားပါ | အသေးစား စိုထိုင်းမှုထိန်းစက် ဖုံးအုပ်ထားပါ | ကြီးမားသည် အီလက်ထရောနစ် ပြသရန် ပံ့ပိုးမှု အပိုင်း | ပလပ် Ins ကွင်းခတ် | အီလက်ထရောနစ် ပြသရန် Frame
ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော ထုတ်ကုန်များ မှို
မော်တော်ကား အလင်း ဖုံးအုပ်ထားပါ | မော်တော်ကား မီးအိမ် ဖုံးအုပ်ထားပါ | ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော ဖုံးအုပ်ထားပါ | အယ်လ်အီးဒီ မီးအိမ် အရိပ် | အယ်လ်အီးဒီ မီးအိမ် ဖုံးအုပ်ထားပါ | ဖျော်ရည် ဖုံးအုပ်ထားပါ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ မှို
Dropper | တဖြည်းဖြည်း တိရိစ္ဆာန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထောက်လှမ်းရေး ပုလင်း | အောက်စီဂျင် မျက်နှာဖုံး | သိုလှောင်ခြင်း သတျတော | ပိုးသတ် ဆီးချို | သွေး စမ်းသပ်ခြင်း တူရိယာ
နှစ်ဆ အရောင် ထုတ်ကုန်များ မှို
ပါဝါ Tool ကို ဖုံးအုပ်ထားပါ | ကျော်လွန် မှို ပြသရန် ဖုံးအုပ်ထားပါ | ကျော်လွန် မှို ပံ့ပိုးမှု ခြေ | ပါဝါ Tool ကို အခြေစိုက်စခန်း | ဆန်းသစ်တီထွင်မှု အီလက်ထရောနစ် ဖုံးအုပ်ထားပါ | နှစ်ဆ ရိုက်သည် အလုပ်လုပ်ပါတယ် စောင့်ကြည့် ဖုံးအုပ်ထားပါ
သေ Casting မှို
သွပ် အလွိုင်း မှို
သွပ် အလွိုင်း အောက် ပံ့ပိုးမှု | ပစ္စည်းကိရိယာ အစိတ်အပိုင်း
လူမီနီယမ် အလွိုင်း မှို
အလေးချိန် စမ်းသပ်ခြင်း တူရိယာ ဖုံးအုပ်ထားပါ | အပြင်ဘက်မှာ အလင်း ဖုံးအုပ်ထားပါ | လေ ဘီး သေ Casting အပိုင်း | မော်တာ ဖုံးအုပ်ထားပါ
ဒေါင်လိုက် ဆေးထိုး မှို နှင့်အတူ ဟာ့ဒ်ဝဲ ထည့်သည် အပိုင်း | တာဘို | TPE ပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ | ဆီလီကွန် အစိတ်အပိုင်းများ | PBT မော်တာ ကွန်တိန်နာ | မျိုးစုံ အမျိုးအစား Socket
20111129 သြစတြေးလျ ဖောက်သည်များ ရှမွေလ နှင့် စတီဗင် အလည်အပတ်ခရီး က စက်ရုံ | 20111204 အတူတကွ ရှမွေလ ရန် တက်ပါ နင် သစ်တော ပန်းခြံ | 20111205 အတူတကွ ရှမွေလ ရန် Chang'an ပန်းခြံ | ဘားနတ် က ပြင်သစ် ဖောက်သည်, လည်ပတ်ခဲ့သည် က compကny in 20121219 The | 20130319 မာကို, က ဆွစ်ဇာလန် ဖောက်သည်, လည်ပတ်ခဲ့သည် က compကny | 20140311 ဂျာမန် ဖောက်သည်များ အလည်အပတ်ခရီး က ကုမ္ပဏီ ဘို့ အကိုးအကား | 20151021 ထောက်ပံ့ က အမေရိကန် ဖောက်သည်, လည်ပတ်ခဲ့သည် က compကny | 20160106 နှင်းလျှောစီး ပို့လိုက်ပြီ က ဖောက်သည်များ | 20160412 အလည်အပတ်ခရီး ဆွစ်ဇာလန် ဖောက်သည်များ ဓာတ်ပုံ ယူ in ဖောက်သည် ကုမ္ပဏီ | 20160413 က အလည်အပတ်ခရီး ရန် က ဆွစ်ဇာလန် cusရန်mer wကs ရိုက်ကူးခဲ့သည် neကr Lကke Lucerne | 20160416 အလည်အပတ်ခရီး ဒတ်ခ်ျ ဖောက်သည်များ နှင့် အလည်အပတ်ခရီး အမ်စတာဒမ် | 20170111 ဆွစ်ဇာလန် ဖောက်သည်များ လာ ရန် က ကုမ္ပဏီ ရန် ပြန်လည်သုံးသပ်သည် က စီမံကိန်း။ | 20170925 ကုမ္ပဏီ စနစ်တကျ အလည်အပတ်ခရီး ရန် ဖင်နစ်ရှ် cusရန်mers နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်သည် အလုပ် | 20190316 ဒတ်ခ်ျ ဖောက်သည်များ လာ ရန် က ကုမ္ပဏီ ရန် ပြန်လည်သုံးသပ်သည် က စီမံကိန်း | 20190515 ပြင်သစ် ဖောက်သည်များ လာရောက်လည်ပတ် နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်သည် က စီမံကိန်း
ဘယ်လိုလဲ အကြောင်း က မှို ကုန်ကျစရိတ် in JCU ဖိအား? | Are အဲဒီမှာ ကန့်သတ်ချက်များ ရန် JCU မှို ဆေးထိုး မှို ဖြစ်စဉ်များ? | ဘယ်လိုလဲ မကြာမီ လုပ်နိုင် ငါ ရပါတယ် ငါ့ ကိုးကား နောက်ကျောလား | ဘာလဲ က ပြုပြင်မွမ်းမံ ကုန်ကျစရိတ် တခါ T1 ပျက်ကွက်လား | ဘာ အမျိုးအစား ၏ CAD ဖိုင်များ လုပ်တယ် မင်း လက်ခံပါသလား | လုပ်ပါ မင်း ကိုင်တွယ် ထုတ်လုပ်မှု ဝန်ဆောင်မှု နောက်မှ မှို လုပ်ခဲ့လား | ဘာ ဟုတ်တယ် JCU Moldâ€™ s ကို စည်းကမ်းချက်များ နှင့် အခြေအနေ?